GameHub: Maktabadda Mideysan ee Dhammaan Ciyaarahayaga | Laga soo bilaabo Linux
In kasta oo ay dad badani ka fikiri karaan, Nidaamka Howlgalka GNU / Linux hadda waxay leeyihiin taageero aad u fiican a ciyaaro kala duwan oo tayo leh, oo ay ku jiraan tayada garaafka ugu fiican iyo sumcadda. Tan, mahadsanid codsiyada heer sare ah sida Steam, iyo kuwo kale oo badan, sida gamehub.
Gaar ahaan, gamehub waa codsi waxyaabo badan oo ka mid ah u shaqeeya sidii mid uun maktabad midaysan dhammaan cayaarahayaga, marka lagu daro inaad kuu ogolaato inaad daawato, soo dejiso, rakibto, ordo oo aad ka saarto ciyaaraha ilaha is waafaqaya
Xilligan, boggeeda rasmiga ah, gamehub waxaa laga heli karaa a nooca xasilloon (sayidkiisa) lambarka 0.15.0-1 iyo a nooca horumarinta 0.15.0.35-dev. Noocyada xasilloon ayaa la siidaayaa markii qaababka cusub la hirgeliyo oo ay shaqeeyaan iyada oo aan la ogeyn arrimo la yaqaan. Noocyada xasilloonida guud ahaan kuma jiraan inta badan astaamaha dhowaanta iyo xoojinta. Iyadoo, noocyada horumarinta ee gamehub Waxay ka kooban yihiin astaamo iyo xoojin cusub oo ku jira tijaabinta ama tijaabinta.
Soo Gala qaabab fayl oo la rakibo taas oo fududeynaysa fulinteeda inta badan noocyada kala duwan Nidaamka Howlgalka GNU / Linux. Qaababka hadda la soo bixi karo waa ".Deb, flatpak iyo appimage". Iyo sidoo kale, waxaa lagu rakibi karaa kaydinta, horay loo qaabeeyey, marka laga reebo kuwa GNU / Linux Distro Pop! _OS, maadaama ay diyaar u tahay rakibid halkaas.
1.2 Ku rakibida
1.3 Screenshots-ka barnaamijka rakibay
Waxay taageertaa cayaaraha aan asaliga ahayn iyo sidoo kale cayaaraha Linux.
Waxay taageertaa lakabyo badan oo iswaafaq ah oo loogu talagalay cayaaraha aan asaliga ahayn, sida: Wine / Proton, DOSBox, RetroArch, iyo ScummVM. Waxa kale oo ay u ogolaataa ku daray emulators caadadii.
Waxay taageertaa WineWrap, taas oo ah xirmo goglan horay loo habeeyay oo loogu talagalay cayaaraha la taageeray.
Waxay taageertaa ilo iyo adeegyo badan oo ciyaarta ah: Steam, GOG, Humble Bundle, iyo Humble Trove.
Kuu ogolaanayaa inaad ku darto (maareeyso) ciyaaraha gudaha lagu rakibay.
Waxay fududeyneysaa keydinta iyo maamulida aruurintaada ciyaarta DRM-ka-xorta ah.
Waxay sahlaysaa inaad kala soo baxdo rakibayaasha, DLC, iyo waxyaabaha gunnada ka ah meheradaha internetka qaarkood.
Ugu dambeyntiina, waxyaabo kale, waxay awood u siineysaa iskudhafyada nidaamyada faylasha ee la is-weydaarsan karo (filesystem overlays). Sidaa darteed, waxay kuu oggolaaneysaa inaad rakibto, ka tirtirto, aad dhaqaajiso oo aad ka joojiso DLC ama Mods adigoon beddelin faylasha ciyaarta waqti kasta. Maaddaama dahaadh kastaa gooni u kaydsan yahay oo aanu saamayn ku yeelanaynnada kale. Iyo sida oo kale, dhammaan isbeddelada feylasha ciyaarta waxaa lagu keydiyaa tusayaal gooni ah waana sahlan tahay dib u noqoshada.
Sidii aan horey u sheegnay, waxaa lagu rakibi karaa siyaabo kala duwan adoo adeegsanaya keydadka iyo baakadaha, siyaabo aad u fudud, oo si wanaagsan loogu sharaxay website-ka rasmiga ah. Daraasadda kiiska, ee ina khuseysa, rakibidda waxaa lagu sameeyay iyada oo loo marayo Terminal (Console), ee a Distro MX Linux 19 (DEBIAN 10), halkaas oo horay loogu rakibay aaladda 'Steam game platform'.
Nidaamku wuxuu ahaa sidan soo socota:
Ayuu yidhi amar amar, loo oggol yahay in lagu daro keyd rasmi ah, ku dar fure bakhaar, cusbooneysii liisaska xirmooyinka dhammaan keydadka hadda jira iyo rakibi GameHub keydkii horey loogu daray.
Screenshots-ka barnaamijka rakibay
Nota: In kastoo gamehub Waxaan si fiican u aqoonsanayaa fadhiga isticmaalahayga Steam, oo soo dejiso oo rakib Proton 4.2 iyo Proton 5.0, iyada oo loo marayo Steam, si sax ah wax uma fuliyaan, in kastoo aan hubo taas, waa inay noqotaa dhibaato u dhexeysa Steam iyo aniga GNU / Linux Distro, ha siin gamehub.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan gamehub goobta rasmiga ah waxaa laga booqan karaa GitHub, ama baadho waxyaabo kale oo iyada ka duwan, sida Lutris waayo, Linux iyo o Juujow, LaunchBox, Sawir, Ciyaar ciyaar waayo, Windows. Waxa intaa u dheer Steam labada madal.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «GameHub», Codsi cayaareed bilaash ah oo furan oo furan ama madal, kuna qoran Vala adoo adeegsanaya GTK + 3, taageerayaasha Ciyaaraha GNU / Linux, noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » GameHub: Maktabadda mideysan ee dhammaan cayaarahayaga
Dislocker, oo ah qalab lagu helo marinnada loo qoondeeyo ee ay qortay Bitlocker kana socota Linux
Goobaha Marti-gelinta Barnaamijka Bilaashka ah iyo Furan: Ugu wanaagsan 2020